ESI EMEGHE MDB USORO - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Ngwaọrụ netwọk nke D-Link ejiriwo ike nke ngwaọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ha na-efu maka iji ụlọ. Dir-100 rawụta bụ otu ihe ngwọta dị otú ahụ. Ọrụ ya anaghị aba ọgaranya - ọbụnadị Wi-Fi - mana ihe niile na-adabere na ngwa ngwa: ngwaọrụ nwere ajụjụ nwere ike ịrụ ọrụ dịka onye na-ahụ maka ihe ntanetị, Onye na-arụ ọrụ atọ ma ọ bụ dịka mgbanwe VLAN na ngwa kwesịrị ekwesị, nke a ga-edozi ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Dị ka ọ dị, ihe niile a chọrọ mgbanwe, nke a ga-atụle n'ihu.
Na-akwadebe router maka nhazi
Ndị niile na-agagharị agagharị, n'agbanyeghị onye na-emepụta na ihe nlereanya, chọrọ nhazi njikere tupu ịmepụta. Mee ihe ndị a:
Họrọ ebe kwesịrị ekwesị. Ebe ọ bụ na onye rawụta na ajụjụ enweghi ike nke netwọk ikuku, ntinye ya adịghị arụ ọrụ pụrụ iche - naanị enweghi ihe mgbochi na eriri njikọ ya na nnyefe ohere ịnweta ngwaọrụ maka nchekwa dị mkpa.
Jikọọ rawụta ahụ na ike, USB nke onye na-eweta yana kọmputa a na-eche. Iji mee nke a, jiri njikọ kwekọrọ na azụ nke ngwaọrụ - a na-ejikọta ọdụ ụgbọelu na njikwa na agba dị iche iche ma bịanye aka na ya, ya mere o siri ike ịghọ mgbagwoju anya.
Lelee nhazi usoro "TCP / IPv4". Enweta ohere a na nhọrọ nke njikọ netwọk nke sistemụ arụmọrụ nke kọmputa ahụ. Jide n'aka na ntọala maka ịnweta adreesị adọrọ na akpaka. Ha kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ a site na ndabara, ma ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, gbanwee ogige ndị dị mkpa na aka.
Ogologo ihe nhazi a agafeela, anyị nwere ike ịga n'ihu nhazi nke ngwaọrụ ahụ.
Ịtọ ntọala nke router
Na-enweghị otu, a na-ahazi ngwaọrụ netwọk niile na ngwa weebụ pụrụ iche. Enwere ike ịnweta ya site na ihe nchọgharị ị ga-etinye adreesị kpọmkwem. Maka D-Link DIR-100, ọ dị ka//192.168.0.1. Na mgbakwunye na adreesị, ị ga-achọ ịchọta data maka ikike. Site na ndabara, tinye okwu ahụhana nbanye ubi wee pịa TinyeOtú ọ dị, anyị nwere ike ile anya na ihe nkwụnye aka na ala nke onye na-ahụ maka redire ma mata kpọmkwem data maka ụdị gị.
Mgbe ị abanye na netwọk weebụ, ị ga-aga n'ihu ịtọ njikọ Ịntanetị. Na ngwa ngwa nke ngwa gadget na-enye nhazi ngwa ngwa, ma ọ bụghị arụ ọrụ na ntanetị redio nke femụwe, n'ihi na ọ dị mkpa ka edozi akụkụ niile maka Intanet.
Tab "Mbido" Enwere nhọrọ maka ịtọ njikọ Ịntanetị. Wee pịa ihe ahụ "Ntọala Ịntanetị"dị na menu na ekpe, wee pịa bọtịnụ ahụ "Ntọala Njikọ Ịntanetị Ntanetị".
Ngwaọrụ ahụ na-enye gị ohere ịhazi njikọ dịka ọkwa nke PPPoE (adreesị IP na ike), L2TP, yana ụdị VPN PPTP. Tụlee nke ọ bụla.
Ejikọta PPPoE njikọ na router na ajụjụ dị ka ndị a:
Na menu ndepụta "Njikọ Ịntanetị bụ" họrọ "PPPoE".
Ndị ọrụ si Russia chọrọ ịhọrọ ihe. "Russian PPPoE (Dual Access)".
Nhọrọ "Ọnọdụ Adreesị" hapụ na ọnọdụ "Dynamic PPPoE" - nhọrọ nke abụọ bụ naanị ma ọ bụrụ na i nwere ọrụ dị iche (ma ọ bụ "IP" ọcha) ejikọrọ.
Ọ bụrụ na ị nwere IP, ị kwesịrị ide ya na akara "Adresse IP".
Na ahịrị "Aha njirimara" ma "Paswọdu" tinye data achọrọ maka njikọ - ị nwere ike ịchọta ha na ederede nke nkwekọrịta ahụ na onye na-eweta ya. Echefula ideghari paswọọdụ na akara "Kwenye Paswọdu".
Aha "MTU" dabere na onye na-enye ọrụ - ọtụtụ n'ime ha na-eji ohere Soviet 1472 ma 1492. Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ na-achọkwa nchịkọta adreesị MAC - a ga-eme nke a site na ịpị bọtịnụ. "MAC Duplicate".
Pịa ala "Ntọala Nhọrọ" ma megharia onye rawụta ya na bọtịnụ ahụ "Reboot" n'aka ekpe.
Iji jikọọ L2TP mee ihe ndị a:
Nkebi "Njikọ Ịntanetị bụ" dị ka "L2TP".
Na akara "Aha / Aha IP" deba aha nkesa VPN nyere site na onye na enye gi.
Ọzọ, tinye aha njirimara na paswọọdụ na mpaghara kwesịrị ekwesị - ikpeazụ na-emegharị n'ọhịa "L2TP Kwenye Paswọdu".
Aha "MTU" dị ka 1460, wee chekwaa ntọala ma malitegharia na rawụta.
A na-ahazi njikọ njikọ PPTP site na iji algọridim ndị na-esonụ:
Họrọ njikọ "PPTP" na menu "Njikọ Ịntanetị bụ: ".
Njikọ PPTP dị na CIS mba nwere naanị adreesị, wee họrọ "Mmetụta IP". Na-esote ubi "Adreesị IP", "Ogwe ihe ntanetị", "Ọnụ ụzọ"ma "DNS" Tinye adreesị, ntaneti subnet, ntinye ọnụ na ntanetị DNS, dika - ozi a ga-adị na nkwekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ nyere ndị na-eweta ọrụ mgbe ị rịọrọ.
Na akara "IP / Aha Aha" tinye ihe nkesa VPN nke onye na-enye gị.
Dị ka ọ dị na ụdị njikọ ndị ọzọ, tinye data maka ikike na ihe nkesa na-eweta ihe na ndepụta ndị kwekọrọ. Okwenye ozo ka ekwesiri imeghari ya ugboro ugboro.
Nhọrọ "Ezoro ezo" ma "Oge kachasị oke" mma ịhapụ ndabara.
Ozi MTU na-adabere na onye na-eweta, na nhọrọ "Jikọọ ọnọdụ" dozie "Na-aga n'ihu". Zọpụta ọnụọgụ ndị e tinyere ma malitegharịa ihe rawụta.
Nke a bụ ebe nkwekọrịta D-Link DIR-100 zuru ezu - ugbu a, onye rawụta ga-enwe ike ijikọ na Ịntanetị n'enweghị nsogbu ọ bụla.
N'ihi ọdịdị nke onye na-ahụ maka redire na ajụjụ, a chọrọ nhazi ọzọ maka ịrụ ọrụ ziri ezi nke netwọk mpaghara. Gaa n'ihu dị ka ndị a:
Pịa taabụ "Mbido" wee pịa nhọrọ "Ntọala LAN".
Na ngọngọ "Ntọala Nchọgharị" lelee igbe "Kwado DNS ọsọ agba anọ".
Na-esote, chọpụta na rụọ ọrụ nke oke ahụ n'otu ụzọ ahụ. "Kwado DHCP Server".
Pịa "Zọpụta ntọala"iji zọpụta ntọala.
Mgbe omume ndị a gasịrị, netwọk LAN ga-arụ ọrụ.
All versions of firmware of the device in question "si na igbe" na-akwado na TV TV - ị dị mkpa iji rụọ ọrụ ya na usoro a:
Mepee tab "Di elu" wee pịa nhọrọ "Ọganihu di elu".
Tinye akà rà "Kwado ọtụtụ iyi mmiri" ma zọpụta ọnụọgụ ndị ahụ.
Mgbe usoro a gasịrị, IPTV kwesịrị ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu.
Ntọala egwu atọ
Igwupụta egwu atọ bụ ọrụ nke na-enye gị ohere ịnyefe data site na Ịntanetị, Intanet TV na telivishọn IP site na otu cable. Na ọnọdụ a, ngwaọrụ ahụ n'otu oge na-arụ ọrụ dịka onye na-eweta redire na ngbanwe: IP TV na VoIP ọdụ ga-ejikọta na ọdụ ụgbọ mmiri 1 na 2, na nhazi ga-ahazi site na ọdụ ụgbọ mmiri 3 na 4.
Iji jiri egwu atọ dị na DIR-100, a ga-arụrịrị na arụmọrụ kwekọrọ ekwekọ (anyị ga-agwa gị otu esi etinye ya oge ọzọ). A na-ahazi ọrụ a dị ka ndị a:
Mepee web interface ma kọwaa njikọ Ịntanetị dị ka PPPoE - otu esi eme ya ka a kọwara n'elu.
Pịa taabụ "Mbido" ma pịa ihe menu "VLAN / Pụrụ Iche".
Buru ụzọ họrọ nhọrọ ahụ "Kwado" na ngọngọ "Ntọala VLAN".
Pịgharịa gaa ala iji gbochie "Ndepụta VLAN". Na menu "Profaịlụ" họrọ ọ bụla ọzọ karịa "ndabara".
Laghachi na ntọala VLAN. Na menu "Ọrụ" hapụ uru "WAN". N'otu aka ahụ, aha nhazi ahụ. Ọzọ, lelee ndepụta kachasị mma - jide n'aka na ọ nọ n'ọnọdụ ahụ "untag"wee na nchịkọta na-esote họrọ "Port INTERNET" ma pịa bọtịnụ na onyinyo nke akụ abụọ n'aka ekpe ya.
Pịa bọtịnụ ahụ "Tinye" na ala nke ngọngọ ahụ, ntinye ọhụrụ ga-apụta na mpaghara ozi njikọ.
Ugbu a "Ọrụ" dozie "LAN" ma nye otu aha aha. Ọzọ, jide n'aka na edozi nhọrọ "untag" ma gbakwunye ọdụ mmiri 4 ruo 2, dịka na nzọụkwụ gara aga.
Pịa bọtịnụ ọzọ. "Tinye" ma lee ntinye na-esote.
Ugbu a bụ akụkụ kachasị mkpa. Na ndepụta "Ọrụ" gosiputa "BRIDGE"ma kpọọ ndekọ ahụ "IPTV" ma ọ bụ "VoIP" dabere na ngwaọrụ nke ịchọrọ ijikọ.
Omume ndị ọzọ na-adabere ma ị jikọọ naanị telephoneti Ịntanetị ma ọ bụ TV USB, ma ọ bụ ha abụọ. Maka otu nhọrọ, ịkwesịrị ịgbakwunye "Port_INTERNET" na agwa "mkpado"wee wụnye "VID" dị ka «397» ma "802.1p" dị ka "4". Mgbe ahụ tinye "port_1" ma ọ bụ "port_2" na agwa "untag" ma tinye ntinye na mpempe akwụkwọ profaịlụ.
Iji jikọọ atụmatụ abụọ ọzọ n'otu oge, megharịa ọrụ n'elu nke ọ bụla n'ime ha, mana jiri ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche - dịka ọmụmaatụ, ọdụ ụgbọ mmiri 1 maka TV cable, na ọdụ ụgbọ mmiri 2 maka ọdụ ụgbọ oloko.
Pịa "Ntọala Nhọrọ" ma na-eche ka onye ntinye redio reboot.
Ọ bụrụ na ị gbasoro ntụziaka ahụ kpọmkwem, ngwaọrụ ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
N'ịkọwa nkọwa nke ntọala D-Link DIR-100, anyị na-arịba ama na ngwaọrụ a nwere ike ịgbanye na ikuku site na ijikọta ebe ọhụụ kwesịrị ekwesị, ma nke a bụ isiokwu maka akwụkwọ ntuziaka dị iche.